June 2017 - Ibsaa Jireenyaa
June 22, 2017 Sammubani One comment
Hiyyeessa jechuun nama homaa hin qabne yookiin waa qabaate bu’uuraalee sadan sirnaan guuttachuu kan hin dandeenyedha. Bu’uuraalen sadan sunniin: nyaata, uffataa fi mana jireenyati. Akkuma namni kamu bu’uuraalee kanniin guuttachuuf battisu hiyyeessis ni battisa. Bu’aa bayii jireenyaa keessatti rakkoolee fi daraara baay’ee arga. Rakkoo fi daraaran kunniin kallatti garagaraatiin isa qunnamuu danda’a. Jireenya hiyyeessa keessatti rakkoon guddaan kan isa qunnamu miidhaa karaa ilma namaatiin itti dhufuudha. Har’a yoo Rabbii fedhe imimmaan hiyyeessaa ni ilaalla. Read more
June 10, 2017 Sammubani Leave a comment
Jireenya keessatti rakkoolee fi daraaran baay’een nama muudatu. Bosona jireenyaa keessa darbanii milkaa’inna fi gammachuu argachuun aarsa baay’ee fi obsa kan gaafatudha. Akkuma bosonni jireenyaa xaxamaa ta’uun aarsi (wareegamni) namni kafalu akkasuma guddaadha. Obsaan carraaqqi kana yoo itti fufan firiin isaas akkasuma guddaadha. Bosona jireenya kana keessa osoo deemtu qoreen si waraanti, ni aadda, dhukkubbiin onne tee irratti ni dhagahama. Qalbiin tee ni cabdi. Bosona jireenyaa yommuu jedhu maal jechuu akka barbaade hubattanii? Bosona jireenyaa yommuu jedhu mukkeen bakka tokkotti baay’atan jechuu osoo hin ta’in, rakkoolee, tola fi haala jireenya ilma namaati. Akkuma bosonni qoree, daraaraa, habaabo, gaalee, fi kkf qabu jireenyi teenyas rakkoolee, badhaadhinna, dhiphinna, fi kkf of keessatti tan hammattedha. Kanaafu, haala jireenya teenyaa bosona jireenya jenne yoo moggaafne nama hin saalfachiisu mitiree? Read more
June 2, 2017 Sammubani Leave a comment
Wantoonni sooma cabsan /balleessan gosa lama. Isaaniis
A.Wantoota sooma cabsan qadaa kan barbaachisu
B.Wantoota sooma cabsan qadaa fi kaffaaraa kanneen barbaachisan Read more